Ucwaningo: Isizathu esenza abantu besilisa bathenge ucansi kubaqwayizi | isiZulu
Ucwaningo: Isizathu esenza abantu besilisa bathenge ucansi kubaqwayizi
Kusetshenziswa abaqwayizi ukuduna abashayeli, kusho amaphoyisa
Uzowashayela ejele amathini ongungqondongqondo wabadayisa ngomzimba
Kuhlengwe abangu-26 endlini 'yabaqwayizi'
Cape Town - Ucwaningo luveza ukuthi nakuba bebaningi abantu besilisa abalala nabaqwayizi, iningi labo alithokozi ngalokhu.
Ngokocwaningo lwe-website yabantu abaphingayo, iVictoria Milan, bangu-47.3% abantu besilisa umhlaba wonke abalala nabaqwayizi, kanti bangu-23.3% kulabo asebekwenza cishe njalo – okungenani kanye ngesonto.
Kubalulekile kodwa ukubalula lapha ukuthi lokhu kuncike ocwaningweni olwenziwe kubantu besilisa abangamalungu ale-website.
Izibalo zocwaningo, olwenziwe kubantu besilisa abangu-6 097 abangamalungu ale-website, ziveza ukuthi u-35% wabantu besilisa abalala nabaqwayizi abajabuli ngalokhu, kodwa bakwenziswa yizimo ezisuke zibaphoqa ngaleso sikhathi.
OLUNYE UDABA: Izizathu ezenze uBonang wavala abantu kuTwitter
Isizathu esikhulu sokuba abantu besilisa bathenge ucansi kubaqwayizi ukungabikho komaqondana – okungu-41% wabo - kanti u-36.% walabo ulala nabaqwayizi ngoba usuke ungagculisekile ngocansi abalwenza nomaqondana babo bangempela noma besikhathi eside.
Ngokwamanani, iVictoria Milan ithi abantu besilisa bakhokha imali elinganisekwa ku-€50 - €200 (R710-R2840) noma elinganiselwa ku- €2 000 (R28 398) ngonyaka kubaqwayizi, kuya ngokuthi uhlala kuphi nezwe.
Ngokwezibalo zeHavocscope, amanani okuthengwa ngawo abaqwayizi eNdiya aqala ku-$1 (R13) kubantu asebebadala kulo mkhakha kuye kufinyelele ku-$1 000 (R13 000) kulabo abangamatshitshi [okuyizingane ezincane].
ENingizimu Afrika iThe Citizen ike yabika ukuthi eGoli abaqwayizi benza phakathi kuka-R3 000 no-R4 000 ngenyanga, kanti bamkhokhisa u-R100 umuntu olala nabo kanye.
ISaftu izongenela ukhukhulelangoqo wesiteleka kuleli sonto
Emizuzwini eyi-47 edlule
ISouth African Federation of Trade Unions izongenela ukhukhulela ngoqo wesiteleka ngenhloso yokuphikisana nesiphakamiso sokuba amaholo abasebenzi angaqali ngaphansi kuka-R20 ngehora.
Inkantolo ichithe isicelo sesinxephezelo somndeni wengane eyagwiliza ethoyilethi lomgodi
Sichithiwe enkantolo isicelo somndeni kaMichael Komape sokunxeshezelwa ngokushona kwendodana yawo, eyagwiliza ethoyilethi lomgodi ngo-2014.
Lisesimeni esibucayi ikhehla eliwe eladini emzini walo
Isesimeni esibucayi indoda engeniswe esibhedlela ngemuva kokuwa eladini emzini wayo osePinetown, entshonalanga yeTheku.
Uphoqiwe ukuba esule emsebenzini wakhe 'ozoshada' noZuma
Bathi akayekwe phansi uZuma
Jhb: 10-24°C Bloem: 8-24°C
Durban - 13:12:28 PM PROTEST ACTION (burning tyres) near the N2 Highway - HEAVY DELAYS in the area Ezinye zasemigwaqeni